1966 (Eprel 8): A mụrụ Gurumaa, Gurpreet Grover na Amritsar, Punjab, India.
1980s: Grover gụsịrị akwụkwọ sekọndrị n'ụlọ akwụkwọ ndị mọnk Katọlik wee gaa SR Government College maka Women in Amritsar.
1980 (mbubreyo): Grover na-aga njem njem njem naanị gafere ugwu India. Ọ gara ebe nsọ dị nsọ wee soro ọtụtụ ndị nkuzi nọdụ ala.
1980s (mbubreyo) 1990s (mbido): Mgbe ọ gachara njem, Grover laghachiri Amritsar wee malite izi ihe n'ụlọ nke ụmụ akwụkwọ ya. Ndị na-ege ya ntị na-eto eto kpọrọ ya "Swamiji."
1990s: Swamiji bidoro yikwasị uwe mwụda nke Sant Dalel Singh gọziri, onye nkuzi mmụọ a ma ama n'ụwa niile si Patiala, Punjab, Nirmala Sikh.
1990s: Swamiji / Gurumaa biri na Rishikesh na obere hermitage dị n'akụkụ mmiri nke Ganga (Osimiri Ganges). Ndị na-achọsi ike na ndị na-efe ofufe malitere ịkpọ ya Anandmurti Gurumaa, bụrụ nke dị mfe dịka "Gurumaa."
1999: Anandmurti Gurumaa guzobere NGO nke Shakti (nzukọ na-abụghị nke gọọmentị) maka ebumnuche nke ịkụzi na inye ike ụmụ nwanyị nọ na India.
1999: Gurumaa malitere ịgbasa ozizi ya na telivishọn na Sony TV na Channel Aastha (asthā, nke pụtara "okwukwe"). Teknụzụ Satellite kụziiri ndị na-ege ntị n'ụwa.
1999: Ndị na-efe Gurumaa wuru mgbe a na-akpọ "Gurumaa Ashram," nke a maara taa dịka Rishi Chaitanya Ashram, na Gannaur, Haryana, nke dịka ederede a ka bụ ebe obibi Gurumaa na ebe izi ihe.
2008 (Machị): Gurumaa sonyere dịka otu n'ime "ndị isi ndu si India" na GPIW (Global Peace Initiative of Women, nzukọ na-ezukọta nke malitere na 2002 dị ka otu nzukọ UN) na Jaipur, Rajasthan tinyere ụmụ nwanyị ndị nwanyị na ndị isi okpukpe / ndị mmụọ site na gburugburu ụwa.
Gọọmenti Anandmurti bụ gọọmenti nke India nke dị n'ebe ugwu, ọkà okwu na-agba chaa chaa na onye ọbụ abụ. Dika onye isi nke otu ndi choro ndi choro ime mmuo site na gburugburu ụwa, obu ezie na India bu ya, ya onwe ya adighi ele onwe ya anya dika "onye nchoputa." Obu ezie na Gurumaa enweghi "yoga," "mgbakọ na mwepụ," ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ nke izi ihe, ọ ghaghị inwe ọganihu ime mmụọ ngwa ngwa na-eto gburugburu ya. Maka nzube nke ịkwado ashram Anammurti Gurumaa ashram, ịkụzi ọrụ ozi na ọrụ ndị mmadụ na-eme dị ka ndị na-abaghị uru ma na India ma United States, e mepụtara aha ụlọ ọrụ. Enwere ike ịsị na Gurumaa bụ "onye nchoputa" nke òtù ndị a, ma aha ndị a anaghị eje ozi dị ka ndị nchọpụta maka ime mmụọ ahụ n'onwe ya. Ka o sina dị, isiokwu a ga-emeso Gurumaa dịka "onye nchoputa" nke "ije" nke ndị na-achọ na ndị na-efe ya gbara ya gburugburu. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta arụrịta ụka banyere eziokwu nke okwu ahụ bụ "njem." Ọmụmụ ihe ọmụmụ okpukpe, Amanda Lucia na-enye nchịkọta nke okwu nsogbu a na ihe kpatara ya iji nọgide na-eji ya na monograph na-adịbeghị anya na gọọmentị ụwa, Mata Amritanandamayi (Lucia 2014).
Anammurti Gurumaa amụrụ Gurpreet Grover na keshdhari (ntutu isi) Sikh ezinụlọ Amritsar, Punjab na April 8, 1966. Otutu n'ime ihe omuma banyere anyi banyere Gurumaa sitere na ihe ndi edeputara n'akwukwo bu ndi mmadu na-ekwu okwu. Dị ka akụkọ ndị a na-eme, malite na nwata, Grover gosipụtara mmasị dị ukwuu n'ihe gbasara ime mmụọ, na-adọrọ mmasị ndị nkụzi okpukpe site n'ọtụtụ ọdịnala, tinyere ndị isi nọ n'ụlọ akwụkwọ ụmụ agbọghọ Katọlik ọ gara, nakwa dịka ọtụtụ ndị nsọ na ndị mụrụ ya nabatara n'ime ụlọ ha. Ndị na-agwa nwanyị na-agwa Grover, dịka nwa agbọghọ, na-akụziri ndị ọgbọ ya n'okpuru osisi na ụlọ akwụkwọ. Mgbe ọ bụ nwatakịrị, ya na nne ya na-amụkarị onye nwe ụlọ na Amritsar, nke Gurumaa kwuru dịka "Maharaj ji." "Maharaj ji" bụ nwa akwụkwọ Nirmala Sikh, bụ Sant Dalel Singh, nke zuru ụwa ọnụ, onye ga-emesị ghọọ Guru guru.
Ọ bụ ezie na Gurumaa na-ele onwe ya anya dị ka onye na-efe ofufe Sant Dalel Singh, ọ naghị etinye oge dị ukwuu na ya, ọ dịghịkwa eguzo n'ọgbọ ya taa. O nwere mkparịta ụka ndị dị mkpirikpi ma na-enwe mmetụta siri ike na ya, nabatara amara ya ma kwado ụzọ nke aka ya. Grover hapụrụ ụmụ akwụkwọ mahadum ka ọ gaa njem njem naanị ha gafee North India, na-eleta ebe obibi njem nleta, na ndị nkuzi na omenala dị iche iche na ọdịnala dị iche iche. Mgbe afọ atọ ma ọ bụ anọ gasịrị, ọ laghachiri Amritsar, na-eyi uwe ọcha, jụrụ nrụgide ndị mmadụ ịlụ di ma ọ bụ nwunye, ma jiri oge ya niile na-arụ ọrụ ime mmụọ na izi ihe, mgbe ọ na-ebi n'ụlọ ndị mụrụ ya. Ọtụtụ n'ime ọrụ nkụzi mbụ nke Gurumaa nyere n'oge ọrụ ụbọchị n'ụlọ ndị ụmụ akwụkwọ nwanyị ya bụ ndị na-elekọta ụlọ, bụ ndị malitere ịkpọ ya "Swamiji." Ìgwè ndị na-eso ụzọ Swamiji malitere ịmalite, ọ chọkwara ohere ya. O weere uwe mwụda Dalel Singh maka ngọzi ya wee laghachikwa Rishikesh, otu n'ime ebe obibi nke njem nke ọ nọrọ n'oge ọ nọ na ya, ya na otu ma ọ bụ abụọ na-eso ụzọ ya, o guzobere obere ụlọ ya n'akụkụ osimiri Ganga. . Ụmụ akwụkwọ ya nọgidere na-abịa, na 1990s, ọ bịara doo anya na Gurumaa dị umeala n'obi na Rishikesh apụghịzi ịnabata ìgwè ndị na-agbaso ya na ebe ọzọ ga-achọta. Ka ọ na-erule oge 1990s, ndị na-efe Gurumaa zụrụ ala na Haryana wee gbanwee ala ahụ (a na-akpọ ya) "Gurumaa Ashram," nke a maara taa dị ka Rishi Chaitanya Ashram.
Na njedebe nke 1990s, site na mgbalị ụmụazụ ya na-eto eto, nwa agbọghọ a si Amritsar, Anandmurti Gurumaa, nwere ike ịghọ guru narị afọ nke iri abụọ na otu ngosi telivishọn aha ya bụ Amrit Varsha (nke pụtara "mmiri ozuzo nke na-adịghị anwụ anwụ "), otu òtù na-abụghị ndị gọọmentị (NGO) na-enye ego maka agụmakwụkwọ nke ụmụ agbọghọ na-amaghị ihe, nke a na-akpọ Shakti, na ashram ọhụrụ na-egbukepụ egbukepụ na Haryana nke nwere ala zuru ezu iji gboo ibuwanye. Ụlọ obibi ya na-ebipụta akwụkwọ dere akwụkwọ, akwụkwọ akụkọ na cassettes, na-emegharị usoro ọmụmụ ihe ọha na eze ya na ihe ndị ahịa nwere ike ịzụta ha.
Na 2000s na 2010s, iru eru Gurumaa agbasawanyela site na ntinye akwụkwọ mgbasa ozi ọhụrụ. Ya na webata webata ya, gurumaa.com, emeela ọtụtụ ihe ọ na-eme iji gbasoo ọganihu nke nkà na ụzụ kachasị ọhụrụ ma nye ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-esite na ya, izute ihe ha chọrọ maka nkuzi, yana ịchọta ndị na-achọ ya. Oghere YouTube na Gurumaa na-egosi Amrit Varsha usoro nke dị na mbụ site na telivishọn telivishọn. Ihe profaịlụ ya na mgbasa ozi na-enye njikọ maka njikọ na ozizi ndị ọhụrụ. "Ndi otu ndi otu" nke otu ndi Gurumaa na-eduzi ndi otu ndi na-eso uz o ya. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, Gurumaa na-eme onwe ya posts na facebook. Ọganihu nke ije ahụ emewokwa ka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụmụ agbọghọ na-enweta akwụkwọ maka agụmakwụkwọ ha. Kwa afọ ọnụ ọgụgụ Shakti maka ụmụ agbọghọ na-aga ụlọ akwụkwọ sekọndrị amụbaola, e mewokwara usoro ego ọhụrụ iji kụziere ụmụaka ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ kọleji, n'okpuru nche anwụ nke ụlọ ọrụ Shakti nke Gurumaa.
N'ịbụ onye a zụlitere n'ezinụlọ Sikh, kụziiri ya n'ụlọ akwụkwọ ndị Katọlik ma ghọta na ọ ghaghị inweta ihe omumu ya na Vrindavan, ebe a na-ahụ maka ọrụ nlegharị anya nke Hindu nke Onyenwe Allah Krishna, Anandmurti Gurumaa jụrụ onwe ya na omenala okpukpe ọ bụla, ma ọ bụ "ịgba," ma ozizi ya na-esi n'aka ọtụtụ. Ọ na-achọsi ike n'okpukpe dị iche iche maka "ọnọdụ ime mmụọ na-abụghị ókè." N'igosipụta akụkọ ya site na ihe omume nke ndị Hindu na ndị Sikh na Kanpur jụrụ itinye nkuzi ya n'otu abalị na ndị na-esote ya, Gurumaa chọrọ ka a kpọọ ya njirimara okpukpe:
O nwere ike ị gaghị ama aha ha niile [okpukpe nke ụwa]. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-akpọ ha niile n'otu n'otu ma jụọ m ma mụ onwe m nọ na nke ọ bụla n'ime ha, azịza m ga-anọgide na-adịghị mma .... N'otu ụzọ ahụ, naanị m bụ 'ịhụnanya'; n'ebe ọbụla m hụrụ ịhụnanya, ndị ahụ bụ nke m, mụ onwe m nwekwaara ha. Ya mere abụ m onye Hindu, onye Muslim, onye Sikh, onye Buddha, onye Juu na Jain; Abụ m ihe niile; M niile ndị a n'ihi na abụghị m nke ndị a (Gurumaa 2010: 37).
N'ịtụtụ ọnọdụ dị n'ọtụtụ ụzọ, Gurumaa jụkwara ịkọwa akara nke aka ya. Ọ kwụsịrị ịwụ uwe elu na-acha ọbara ọbara, uwe na-eyi ọ bụghị nanị site n'aka ndị Hindu renunciants (sannyasis) kamakwa site n'aka ndi Nirmala Sikhs. Ọ nọgidere na-eyi agba ahụ mgbe niile, ma na-eyi uwe ndị ọzọ na agba, dị ka obi ya si dị, ọ na-enwekwa mmasị ịdebe ndị mmadụ na-eche banyere njirimara ya na ejiji ya na akara aka n'egedege ihu ya (Rudert 2014). Gurumaa anaghịkwa ekwe ka ndị Ashramite oge niile kpọọ ha ụzọ sannyas, ọ bụ ezie na ha na-eme ụdị mmụgharị nke mmiri. Ọ na-agba ndị ya na-efe ya ume ka ha tinye aka na omume ndị nwere ike iche na ha enweghị mmasị na okpukpe ha, na-agwa Sikhs ka ha na-akpọ Hindu mantras na Hindu ka ha na-asụgharị "Hu." Ọ gwakwara ndị na-ege ya ntị ozizi na akụkọ banyere sants site n'okpukpe okpukpe dị iche iche nke subcontinent, na-eme ihe ọtụtụ ndị na-eme ka ndị mmadụ ghara ịchọta ihe dị iche iche na-enweta site n'amamihe nke ọdịnala dị iche iche mgbe ha na-adịghị "agbụ" ha.
Rudert na-ekwusi ike na ngụgụ olu nke Gurumaa na-enye aka ịghọta ya dị ka onye dị n'oge a ahụ ike, na-agbaso nzọụkwụ nke ụkwụ ya dị ka Guru Nanak, Kabir, na ndị ọzọ na-abụ abụ nke ndị India nke dị n'ebe ugwu, bụ ndị na-eji nlezianya ahụmahụ, nlekọta guru na abụ abụ banyere ofufe okpukpe (Rudert 2017). Dịkwa ka ugwu India sants na Sufis bụ ndị na-asụ abụ n'asụsụ Hindi na Punjabi, Gurumaa na-ekwusara ndị Hindu na ndị Sikh ndị isi, gụnyere ndị Jains, Ndị Kraịst na ndị Alakụba. Ọ na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara isiokwu na nchegbu nke ụwa, na, dị ka ya ahụ ike na-ekwukarị banyere ọnwụ na ọhụụ, dịka ụzọ isi kpalie agụụ ime mmụọ n'obi ndị na-ege ya ntị.
Ọbụna mgbe a na - ejighị mara ya, Gurumaa na ọtụtụ ndị na - efe ya na - etinye aka na ụzọ "omenala" nke Guru -guru-bhakti), nke nwere ọgaranya na ogologo akụkọ ihe mere eme na subcontinent Indian, ọ bụghị nanị na omenala Hindu. Abụ na akụkọ nke sants Gurumaa emeela otutu ugboro mgbe o gosiputara guru-bhakti. Aghọtara ụzọ guru-nrube dị ka ụzọ dị irè iji nweta nnwere onwe. Gurumaa na-agba ahụ ike ọdịnala taa site n'ịbụ abụ nke ndị a na-abụ uri na-abụ abụ n'oge ochie na-agbakwụnye nchịkọta ọtụtụ narị abụ ya. Dị ka sants, Gurumaa na-eji abụ na-eme ka uche na uche nke ndị na-ege ya ntị gee ntị tupu ya amalite ikwusa ozi ọma ya. Gurumaa na-ebupụta ọtụtụ n'ime okwu ya na-adabere na abụ nke a ahụ ike, na-agbakwụnye ihe ngosi nke oge a na amamihe ya.
Dị ka sants, Ozizi Gurumaa na-esite na amamihe dị iche iche. O nyewo otutu okwu otutu oge (mgbe otutu otutu afọ) okwu na Bhagavad Gita, Abụ Shankaracharya, abụ Kabir, Guru Nanak's Japji Sahib, Guru Govind Singh Dasam Granth, ma ọ dị mkpa, o tinyewo akwụkwọ ya iji tinye amamihe nke sitere n'èzí nke India na-abụ abụ na ikwusa banyere abụ Rumi. N'ọga n'ihu na-eto eto nke ụlọ ọrụ Gurumaa, anyị na-ahụ ịhụnanya ịhụnanya ya maka ndụ ya niile. Anyị na-ahụkwa na ya na-ejikọta ya, na-ekwekọ na ọjụjụ ọ na-ekweghị ịnata akara ma ọ bụ nke gosipụtara ekele maka ịhụnanya n'ụzọ dị iche iche.
Ndị na-achọ Gurumaa bụ ndị na-atụle onwe ha guru-bhaktas (ndị nnọchiteanya nke guru) gosipụtara nrara ha na-asọpụrụ guru n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche, ọtụtụ na-ele ya anya dị ka isi ha ma ọ bụ nke kachasị amasị ha (ésvaa deva) ma chee echiche banyere guru ha dị ka Onye Ozizi Chineke (gurudev). Abụ egwu nke Gurumaa na abụ nke sants ọ na-abụ abụ na-emesi nkwenye a nke onye devotee nke onye ọhụụ ya bụ n'ihi amara nke ezi guru (satguru). Ndị na-efe ya na-ele ya anya satguru ma kwuo ya dị ka Gurudev. Ndị Ashram na ndị ọbịa Ashram na-ekele ibe ha ma jiri aka ha gbanye aka na ekele "Jai Gurudev" n'ememe guru ha, bụ ndị ha ghọtara na ha bụ eziokwu nke Chineke.
N'ikpeazụ, Akwụkwọ Gurumaa, Gurumaa jupụtara na nkọwa na ndụmọdụ maka ndụ oge a. Mmegbu nke ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ, nsogbu nke igbu ọchụ nke nwanyi, na mkpa maka agụmakwụkwọ ụmụ agbọghọ bụ isiokwu dị ọkụ maka Gurumaa, bụ nke ọ na-etinye oge dị ukwuu na nkwupụta ihu ọha ya. Ọ bụ ezie na ọ naghị ele onwe ya anya dị ka onye na-elekọta mmadụ, ọ na-enwe mmetụta na ọ ga-eme ka ohere maka ụmụ akwụkwọ ụmụ nwanyị na India na mkpa ọ dị itinye ego ya na nke a mgbe o guzobere NGO nke Shakti. Kwa afọ, ọ na-ewetara ya ndị ashram ndị na-enweta agụmakwụkwọ ya. Mgbe ya ashram, ụmụ agbọghọ na chaperones na-aga ọzụzụ na ntụgharị uche na yoga yoga, na-anọ oge na Gurumaa.
Ndị na-eso ụzọ na-ekwu na Gurumaa na-agbapụ omenala ọdịnala maka mmeso ha mesoro ụmụ nwanyị, na okwu ndị e dekọrọ na akwụkwọ na mgbasa ozi ndị ọzọ gosiri nke a. Ọ naghị egbochi ọdịnala, na-akpọ okpukpe dị ka "isi nwoke." Na-atụle otu akwụkwọ, akpọ aha Shakti, nke sitere na okwu Gurumaa banyere ụmụ nwanyị, Rudert dere, sị:
[Gurumaa] na-ekwu na nwoke efu "ndị a na-akpọ ndị nlekọta nke okpukpe na ọrụ" jiri nlezianya kọwaa akụkụ Akwụkwọ Nsọ iji gbochie ụmụ nwanyị site n'ịgwa ha mgbe nile, "'N'ihi na ị bụ nwanyị, ị bụ onye na-adịghị ọcha, ya mere ị gaghị enweta ihe ọmụma . Ị gaghị enweta nzọpụta. ' Nke a bụ nzuzu nke a! "(Rudert 2017, na-ekwu na Gurumaa 2006: 43-44).
Ọbụna ọdịnala Sikh nke a mụrụ ya, nke na-anaghị ewepụ ụmụ nwanyị site na nnwere onwe nke ịhapụ onwe ha kpamkpam, Gurumaa kwuru na ọ bụghị ọganihu na ọdịbendị nke okike ụmụ nwoke na-agụnye ụmụ nwanyị dịka ndị isi na omenala. Okwu Gurumaa n'ogologo ya na ndi mmadu banyere otu esi eme ka umuaka ndi nwere onwe ha, ndi guru akwukwo ndi nwere ike ime mkpebi onwe ha banyere di na nwunye. Ọ na-akatọ ndị na-ege ya ntị mgbe nile maka ịgwọ ụmụ nwoke, na-enwe ihe ịga nke ọma ma na-agba ụmụ okorobịa ume ruo n'ókè nke imebi ha. Ọ na-ekwu banyere alụmdi na nwunye n'etiti ndị ikom na ndị inyom dịka mmekorita nke ya na onye ọ bụla ga-eji aka ya na-ekwu banyere ibe ya na nkwanye ùgwù "ji".
Dị ka ya na-ede uri Hindi ahụ ike Ma, Gurumaa abughi ihe omimi. Otú ọ dị, usoro nke yogic chadhana eme kwa ụbọchị na Gurumaa ashram bụ ụdị nke ememe, ma ọ bụ kwuo ya mma, ọ bụ ịdọ aka ná ntị na omume ime mmụọ. Ụbọchị na-amalite n'isi nke ashram na ịsa ahụ gbara ume na 5: 00 AM. Ụtụtụ ike na-amalite na 5: 30, na-esote yoga postural (ọsana), mgbe ahụ na -eme ume iku ume (pranāyama), na ntụgharị uche (dhyāna), tupu oge ụtụtụ. A na-eri nri n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Anapurna, nke aha ya bụ chi nwanyị nri na onyinye. Ọ bụ ezie na ụlọ oriri na ọṅụṅụ bụ aha nwanyị Hindu, Sikh langar ụdị nlekọta iri nri, nke ndị nnọchiteanya na-anọdụ ala iri nri ọnụ, n'agbanyeghị agbanyeghị na ịkpachara anya nwoke. Mgbe nri ụtụtụ gasịrị, ndị ashramite oge niile na ndị ọbịa na-aga ọrụ ha (ike) iji na-efe ashram na ụfọdụ ike. N'etiti ụtụtụ, Gurumaa na-enye darshan. Mgbe nri ehihie, ọtụtụ ndị na-ezu ike, na-arụ ọrụ ọzọ tupu nri abalị ma na-aga nnọkọ ntụrụndụ nke mgbede, na "hut" nke a na-akpọ Patanjali, mgbe onye edemede nke Yoga Sutra. Mgbe nri anyasị, onye ọ bụla nọ ashram na-eso ná mgbede ike wee mantra ugboro ugboro (mantra-japa). Ọdịiche dị iche iche na-apụta na usoro ihe omume n'ihi mgbanwe oge oge, ọrụ pụrụ iche ma ọ bụ mgbapụta na-eme na ashram, ma usoro ụbọchị na-anọchite anya ememe raara onwe ya nye nke yogic chadhana, otu onye Gurumaa na-agba ndị ọbịa ya ume ka ha gbanwee n'ụzọ nke ha n'ụlọ.
na ahụ ike ọdịnala, ịrụ ọrụ guru ofufe dị ka ụzọ maka ntọhapụ na-akụnye ememe okpukpe nke metụtara ụlọ nsọ na onyinye. Ya mere, guru devotional mmegharị na ụfọdụ ụzọ na-emegharị ememe n'isi ya. Na guru-bhakti, omenala na-aga n'ihu, ma ememe na-eduzi guru. Nye ọtụtụ ndị na-etinye aka, darshan nke Gurumaa bụ ememe kachasị mkpa nke ụbọchị ma ọ bụ maka nleta ashram dum. N'elu guru-ofufe, ofufe na-efe ofufe nke guru. Ije ije nwere ike ịbụ njem gira ashram. Ememme kalenda, Guru-Purnima, nwere ike ịdị mfe na ememe nke afọ na onye na-enweghị mmasị na-mmasị guru-bhakta.
Rishi Chaitanya Ashram [Foto dị n'aka nri] na-agba ọtụtụ ememme calendrical n'afọ niile. Ememme ndị a na-adọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-achọ mmụọ na ashram, ndị na-efe oge dị ogologo na ndị mbido. Ememe ndị a ma ama nke a na-eme na ashram gụnyere: Maha Shivratri, Holi, ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ nke Gurumaa, Sanyas Diwas (na-eme ememe Gurumaa maka uwe ocher), Navratri / Durga Ashtami, Guru Poornima, Krishna Janmasthami, Diwali, na Gurpurab (gurumaa.com).
Na njedebe 1990, ndị na-efe Gurumaa nwetara ala, kwụrụ ụgwọ ma wuo ya Ashram na Gannaur, Haryana, ihe dị ka kilomita 60 site na Delhi na isi National Highway 1, nke dị n'etiti India na Kolkata, site na Delhi, gaa Amritsar na Lahore. N'ime afọ mgbanwe site n'aka Rishikesh hermitage na Gannaur ashram, Gurumaa bi na Delhi wee nọgide na-akụzi ihe n'ọtụtụ ebe na India. Site n'usoro nke ndi na - eso ụzọ ya, ozizi Gurumaa gbasaa site na mgbasa ozi redio, telivishọn na Intanet. Ozizi ndị a dọtara ndị si n'akụkụ nile nke India, n'ikpeazụkwa, na nso nso na narị afọ iri na ụma site na telivishọn, n'èzí India. Na arịrịọ nke ndị na-achọ, Gurumaa malitere ịga kwa afọ na United States na UK Taa, a na-emezi ozizi ndị Gurumaa na telivishọn, ma dị mkpa, ha na-agbasazi ugbu a na ebe nrụọrụ weebụ ya na ọwa YouTube. Ndi otu "ndi otu oru" nke Gurumaa, mgbe ha biri na Delhi, bi na Gannaur ashram, na-edebe ihe nile o mere ka o nwee obi ike "n'ime ulo" ebe o nwere ike ilegide ha anya. Ndị enyemaka na ndị ndú doro anya esitewo n'akụkụ Gurumaa, ma n'ikpeazụ ọ na-eme mkpebi niile maka nzukọ na-eto eto.
N'India, Rishi Chaitanya Trust bụ akụ na ụba nke ụlọ Gurumaa na ụlọ na-agbagha, Rishi Chaitanya Ashram, ọrụ. Na mmalite, e guzobere Gurumaa dị ka isi nke Trust a. Na United States, Nzukọ 501C-3, New Age Seers, Inc., guzobere nzukọ ndị Gurumaa nke America iji kwado NGO Shakti na India na njem nleta ya kwa afọ na North America, na-enye ya ohere ịkụziri ndị mmadụ ozizi ya na-enweghị ụgwọ .
Ụmụ akwụkwọ Gurumaa si na obodo ukwu mepere emepe, obodo buru ibu, nke nta na obere, na ọtụtụ n'ime ndị India. Gurumaa jiri nlezianya na-aga n'obodo ukwu ndị dị n'India, na mgbe ụfọdụ, karịsịa na Punjab, na-eleta obodo nta ebe ọ na-ekwu na ebe ọzọ abughi nsogbu na nleta. Gọọmenti Gurumaa, nke mezuru n'oge afọ ole na ole ọ gụrụ akwụkwọ na Bekee, na-enye ya ohere ịgbasa ozizi ya n'ozuzu ya. Ọ na-akụzi ihe n'asụsụ Hindi (asụsụ nke ise a kasị asụ n'ụwa) ma mgbe ụfọdụ na Bekee, karịsịa mgbe ọ na-eme njem na mba ọzọ, na-ejikarị asụsụ abụọ na-akụzi ihe. Ụmụ akwụkwọ si gburugburu ụwa amalitela ịga leta Rishi Chaitanya Ashram, ebe ha nwere ike ịme onwe ha ka ha na-arụ ọrụ zuru ezu n'oge ọrụ ịṅụ ahụ (sadhana), mgbe ha nọ n'ihu ọnụ ha hụrụ n'anya (gurudev). Ebe ashram na-eme ka o nweta; ọ na-anọ na njem dị mfe site na New Delhi, Amritsar, Rishikesh na Haridwar. Umu ahihia nke ashram bu ndi na - agba ume na umu ndi mmadu na ndi mmadu ndi na - eme ka ndi mmadu na - eme ka ha na - eje ozi na Guru,guru-sevā) site n'aka ashram, iji nọrọ n'ihu ya na "ịdanye [batrị] ha" site n'ibibi ike ya.
Ogologo oge na-aga n'ihu na-enye otu ihe ịma aka maka nzukọ dịpụrụ adịpụ gburugburu otu onye ndú charismatic adịghị adabere na "ọhụụ" ọ bụla ma ọ bụ ọbụna ruo n'ọgbọ ọ bụla. Atụmatụ Gurumaa n'echiche ya n'ịgbaziri ọtụtụ ihe na omume na ọdịnala dị iche iche bụ inwe ike imeghe uche na obi. Ọ na-achọ ịrịọ ọnụ ọgụgụ kasịnụ nke ndị mmadụ. Ụdị a ga-akwado ma kpọọ nkatọ site n'aka ndị na-asọ oyi na-ahụ ya dị ka ndị nwere uche, na-akụziri ndị Hindu na ndị Sikhs n'ụzọ dịgasị iche iche ịchọta ndị na-achọ enyemaka site na ọnyá dị iche iche. Ndị ọzọ enweghị mmasị na ọdịda nke ọdịnala okpukpe ha a ma ama. N'agbanyeghị nke ahụ, ikike Gurumaa na-eguzo onwe ya, n'enweghị nkwado iwu nke omenala okpukpe ọ bụla ma ọ bụ ezinụlọ, kwadoro mmụọ India na ekele maka "ahụmahụ kpọmkwem" nke ọzụzụ okpukpe ma ọ bụ nke.
Gurumaa ekwuola na ọ gaghị akpọ onye ga-anọchi ya na na ọ gaghị eguzobe usoro (parapara). Gurumaa na-ekwu na nsogbu na-ebili n'òtù okpukpe n'ihi na ụmụazụ nke ndị nkuzi nwere nghọta (ndị na-eso ụzọ nke onwe ha adịghị ama) kọwaara ozizi iji kwekọọ n'uche nke ha. Otú ọ dị, n'enweghị onye ga-anọchi ya, otu ihe ịma aka ọ bụla na-aga n'ihu onye nkụzi na-adọrọ adọrọ na-ebili mgbe onye nkụzi a ma ọ bụ na-agabiga. Kedu ihe ga-abụ nke mmegharị ahụ mgbe Gurudev apụla? Ndi NGO nke Shakti ga aga n'ihu? Oge n'onwe ya nwere ike ime ihe guru n'uche ma nwee ike ịchọta onwe ya otu ụbọchị maka mkpa nke onye nọchiri ya ma ọ bụ onye ndú ndị ọzọ.
Image #1: Foto nke Gurumaa.
Image # 2: Foto nke Gurumaa na David Frawley na Swami Dayananda Saraswati na Makingzọ Ime Ihe Omume Nwanyi.
Image #3: Foto nke Rishi Chaitanya Ashram.
Gurumaa, Anandmurti. 2010. Ịhụnanya Rumi. New Delhi: Akwụkwọ zuru ezu na-agba akwụkwọ Hind.
Gurumaa, Anandmurti. 2008. Shakti: Ike nwanyi (Revised Edition). Delhi: Gurumaa Vani.
Rudert, Angela. 2017. Voice New Shakti: Guru Devotion na Nwanyi Ime Mmụọ. Lanham, Maryland: Akwụkwọ Lexington.
Rudert, Angela. 2014. "Sufi, Sikh, Hindu, Buddha, TV Guru." Pp. 236-57 na Religious Pluralism, State na Society na Asia, nke Chiara Formichi dere. London na New York: Routledge.